Iphepha leModeli yeFommodel yombala weBhodi Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Ngokukodwa iintombazana ziyakuthanda ukujongana neempahla, izixhobo kunye neendlela zakutshanje. Kwaye bathanda ukudlala umqambi ngokwabo. Imibala yethu yombala kwi "Fashion Model Fashion" isekela le nto yokuzonwabisa ngokunika abantwana umbala wamaphepha abamema ukuba benze izicwangciso zabo.
Umbala wekhasi I-Fashion Design & Fashion-Model kwi-bikini
Imifanekiso yethu ebalabalayo ibonisa iintlobo ezahlukeneyo ezifana ne-bikini, iingubo, iingubo zokuhlwa okanye izixhobo.
Umbala wephepha lomzekelo kwi-bikini njengomboniso ocacileyo
sicela contact Ukuba ukhangele umbala okhethekileyo kunye nesisusa esikhethekileyo. Siyakuvuyela ukudala iphepha lakho lombala ngokubaluleka kwakho kwisithombe.
Yenza ipeyinti yeModeli-I-Model Model kwi-Bikini
Umbala wekhasi lomzekelo kwi-bikini yokubala
I-Fish & Underwater World